Banyere Anyị - Haojing International Trade (Shanghai) Co., Ltd.
Afọ 20 nke ahụmịhe ọrụ
E guzobere Haojing International Trading na 2020. E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2003. Anyị nwere ụlọ ọrụ aka abụọ dị na Shanghai na Zhejiang. Ọ bụ ihe nkpuchi ihe eji eme ihe eji emeputa ihe nkpuchi nye ndi ahia n’uwa nile.
Anyị nwere ndị ọrụ 180 ugbu a, gụnyere 30 R&D na ndị ọrụ teknụzụ. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike, ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 100 nchọpụta ikike ma bụrụ ụlọ ọrụ dị elu nke ụlọ ọrụ Songjiang District nke Shanghai na-akwado.
Malite na 2020, HAOJING gbanwere site na azụmaahịa ụlọ gaa ahịa mba ọzọ, wee bido ịmịpụta akụrụngwa akụrụngwa n'okpuru usoro izugbe, gụnyere igwe nkpuchi mbadamba, igwe N95 nkpuchi na igwe nkpuchi iko, wdg, yana anyị na-enyekwa akụrụngwa dịka ndị ahịa mkpa, gụnyere ndị na-abụghị kpara Cloth, meltblown ákwà, imi warara na ntị eriri, wdg E nwere 11 dị iche iche nke ngwaahịa, gụnyere n'ụzọ zuru ezu akpaka na ọkara akpaka mmepụta edoghi.
Productdị ngwaahịa anyị zuru ezu, nke nwere ike izute ihe dị iche iche ndị ahịa chọrọ, gụnyere ngwaọrụ maka imepụta nkpuchi, anyị nwere ike ịnye. Ọtụtụ ngwaahịa na teknụzụ enwetawo ikikere mba wee nweta nnabata CE.
Mgbe otu afọ nke mmepe, eresị anyị ngwá na United States, Turkey, Spain, Mexico, Pakistan na South Korea.All anyị na ngwaahịa ga-anwale na video shot tupu Mbupu, na akụrụngwa ga-mgbochi nchara na-agwọ ọgwụgwọ iji hụ na ndị ahịa nwere ike iji akụrụngwa anyị nke ọma.
Ngwa gụnyere nlekọta ahụike, ụlọ ọrụ eletrọniki, ụlọ ọrụ nri, nlekọta mma na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta, wdg.
Haojing bụ ọkachamara na mmepụta, mmepe na ire ahịa igwe N95, igwe nkpuchi dị larịị, igwe nkpuchi iko, igwe nkpuchi KF94 na igwe nkpuchi duckbill. E nwere ụdị ngwaahịa dị iche iche 11, gụnyere eriri akpaka na ọkara akpaka mmepụta.
Anyị nwere ebe obibi mmepụta 3 na nzukọ mgbakọ 2. O nwere akụrụngwa CNC ziri ezi nke akụrụngwa, ụlọ ọrụ akụrụngwa ise na igwe 6000W.
Ebe omumu ihe omuma di ocha. Enwere ndị na-ehicha ihe kwa ụbọchị. Ugbu a ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ọtụtụ nkpuchi igwe na ngwaahịa, nke nwere ike izute ọtụtụ mkpa ndị ahịa. Anyị nwere ọtụtụ usoro mmepụta iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnweta igwe nkpuchi n'ime otu izu. Anyị na-anabata ịhazi. Ahaziri nkpuchi igwe nwere ike Ẹnam ekese n'ime 20-arụ ọrụ ụbọchị.
Gịnị ahịa na-ekwu?
Ogo dị elu, ọsọ ọsọ, ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji mee nkpuchi, meere anyị uru. —— Ntughari
Enwetara m igwe ahụ, ngwugwu ya dị nke ọma, mgbe m bidoro iji ya, injinia ihe nrụpụta a nyere m ezigbo nkwado, ọkachamara nke ukwuu. —— Murat
Nke a bụ ụlọ ọrụ dị oke egwu obibi. Onye nnọchi anya ọrụ m nwere ndidi, zaa ajụjụ m niile ma nyekwa m ndụmọdụ na ịkọwapụta oge na nke m. ——Humphrey
Nke a bụ oge Frist m zụrụ igwe ahụ site na China, Site na nzaghachi ndị ahịa ndị ọzọ, ha kwuru na ngwongwo CHINESE adịghị mma, mana enwere m obi ụtọ na m nwere nnukwu ihu ọma izute HAOJING, ha na-enye m ọrụ kachasị mma mgbe m nwụsịrị. ——Haroon
Ejiri maching m yana ọ na-arụ ọrụ ọsọ 40pcs kwa nkeji ma na-arụ ọrụ nke ọma, Achọrọ m ịzụta otu setịpụrụ ọzọ, ka m nwee oge ọ haveụ, ekele dịrị gị! —— Omar
Anyị bụ ndị n'ichepụta na trading ụlọ ọrụ tụnyere ụlọ ọrụ na ahia. Ndị otu anyị dị ka nnukwu ezinụlọ. Onye ọ bụla nwere ọrụ nke ya. Anyị nwere ọdịbendị ụlọ ọrụ nke anyị, nke anyị niile tụlere ọnụ. Kwa afọ anyị nwere ọrụ otu ma gaa ebe dị iche iche. Kwa ọnwa enwere ndị ọrụ na-eme emume ncheta ọmụmụ, anyị na-arụkwa ọrụ na ụdị obi ụtọ na izu ike. Ọ bụghị naanị nke ahụ, anyị nwere usoro nlekọta siri ike ka anyị wee nwee ike mezue ọrụ anyị nke ọma ma mee ka ụlọ ọrụ siri ike ma sie ike.